Ny rehetra momba ny lalao video amin'izao fotoana izao, Pokémon GO | Androidsis
Ny rehetra momba ny Pokémon GO, ny lalao video izay mahalasa adala ny planeta iray manontolo
Izahay dia nanana 9 andro hadalana tena izy ho an'ny trangan-javatra manerantany izay tonga amintsika nefa tsy andrasantsika izany, noho izany dia mbola manandrana mamerina sy mampifanaraka izany zava-misy izany izahay, izay mitady Pokémon, ilay Nintendo izay mitarika fialamboly olona an-tapitrisany indray na izay ho avy rehefa ilay horonan-tsary Navoaka manerantany ny lalao androany. Ka eo am-piandrasana onja iray hafa hisintona antsika mankany amoron-dranomasina hanandrana hijoro amin'ny tongotr'ireny tantara hafahafa ireny, ny vaovao farany ary ny vaovao hafa ho avy, ny famintinana ny zava-nitranga teny amin'ireto andalana ireto no tsara indrindra vitantsika talohan'io. tonga. faran'ny herinandro
Pokémon GO koa dia nanelingelina ny Androidsis ary na ny mpiara-miasa amiko Francisco na ny mpanoratra, dia tsy maintsy nifandray tamin'ny vaovao marobe izahay. Tsy azo soratana daholo, ka nanandrana izahay maneho ny zava-dehibe indrindra Toy izany koa, horonantsary marobe no natao mba hampisehoana ny dingana voalohany tsy maintsy raisin'ny olona rehefa mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ny finday avo lenta hihaza amin'i Pokémon izy ary ho mpanazatra tsara indrindra eto an-tany, na dia an-tapitrisany toa antsika aza. Alohan'ny tsunami rehetra izay ao aminy Pokémon GO, ity fanoratana manaraka ity dia manangona ny vaovao rehetra izay nitranga tao anatin'ireo sivy andro izay vavolom-belona izay vavolom-belona amintsika.
1 Torohevitra sy tetika ho an'ny Pokémon GO
2 Pokémon GO sy ny vaovao ofisialy
3 Ny fahaliananao, ny zava-misy tsy mahazatra ary maro hafa
Torohevitra sy tetika ho an'ny Pokémon GO
Amin'ny lalao video iray izay ampiasana GPS, efijery mavitrika ary fakantsary, dia manana ianao nahatonga ny batterin'ny finday avoakanay ho faty teny an-dàlana raha saika nihazakazaka nihaza ilay Pokémon niseho tamy ny zoro izahay. Niezaka ny namoaka ireo torolàlana lalao mety indrindra izahay nandritra ireo 9 andro voalohany, ka manantena aho fa manohy manompo anao tsara izy ireo. Manaova horonantsary na dia hihaza aza.
Pokemon Go, asehonay anao ny fomba fametrahana azy ary hihaza Pokemons voalohany izahay
Ny sarin'ny karazana fanafihana / fiarovana ny Pokémon izay hahafahanao mahay ao amin'ny Pokémon GO
Pokémon GO sy ny vaovao ofisialy
Ny reniranon'ny ranomainty dia nihazakazaka tato ho ato vaovao sisa tavela mahaliana miverina. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsy mora ny manivana izay iza no tena mahaliana, ary tsy drafitra iray hanatsarana tarehy miaraka amin'ny vaovao 4 na 5 isan'andro koa isika. Ka tamin'ity lafiny ity dia niezaka izahay mba tsy hanadino zava-dehibe.
[APK] Sintomy ny Pokémon Go ankehitriny ary miomàna handeha hihaza sy hiady ho an'ny manodidina anao
Niakatra be ny fizarana Nintendo taorian'ny fanombohan'ny faritra Pokémon GO
Pokémon GO dia vonona ny hisongona Twitter amin'ireo mpampiasa mavitrika isan'andro amin'ny Android
[APK] Fanavaozana Pokemon Go miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanohanana ny Android N
Pokémon GO dia misy any Espana izao
Ny fizarana Nintendo dia nitombo ny vidiny 86% tao anatin'ny 8 andro
Ny fahaliananao, ny zava-misy tsy mahazatra ary maro hafa
nefa tantara an'arivony sisa no hotantaraina mifandraika amin'ny Pokémon GO, ary misy maro izay tonga avy any Etazonia. Azoko atao ny manome toky anao fa mandritra ny herinandro vitsivitsy dia hanana izay hitranga eto amin'ny firenentsika isika, manomboka anio ny fisintomana ofisialy avy amin'ny Google Play Store.
Ny zava-misy tsy mahazatra sy mahagaga izay ateraky ny Pokémon GO
Mila lalao video hafa toy ny Pokémon GO isika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny rehetra momba ny Pokémon GO, ny lalao video izay mahalasa adala ny planeta iray manontolo
Io no lalao lalaovina indrindra amin'ny tantara, ny teny tadiavina indrindra ao amin'ny Google, mihoatra lavitra ny zava-drehetra izy io ... saingy tsy miantso ahy izy. Ny marina dia aleoko i Clash Royale, rehefa heverina fa vaovao ihany koa.
Ho ahy, ny zavatra tsara indrindra dia ny fitondrana olona mankeny amin'ny arabe ary manokatra làlana vaovao ho an'ny zava-misy marina ... ka ho hitantsika eo ny alehan'ny filokana vaovao an'ny orinasa hafa.
Tsy isalasalana fa izany no lafy tsara indrindra. Ny fandraisana andraikitra hivoahana kely ao an-trano sy hifaneraserana kely dia tena tsara, hoy aho amin'ny maha olona miasa an-tserasera ary mandany ora maro amin'ny PC hehe.
Ny fomba fijeriko dia ny lalao tsy haiko loatra satria mamokatra izay vokariny, hehe. Anananao daholo ny antony.
[APK] Nasehonay anao ny fanavaozana ny Hangouts hahafahanao mankafy ny fiasan'ny hafatra an-tsary vaovao alohan'ny olon-kafa